Glass ịgba ịgba karama Manufacturers, Suppliers - China Glass ịgba Bottle Factory
16oz 500ml doro anya boston gburugburu iko na-akpali ịgba karama na silicone aka uwe maka mkpa mmanụ ihicha
Anyị mepụtara ọfụma a dị mfe ma dị mma nke na-ebute ihe nkesa na akwa silicon maka nchekwa agbakwunyere maka karama iko. Maka ojiji na ihe niile anyị Cleaner ịgba ngwaahịa. Wet with All All Pur Sanitiser Spray or Bathroom Cleaner raygba.
8oz 250ml amber boston gbaa gburugburu iko karama na-akpalite sprayer
8oz iko boston gburugburu ịgba karama, olu size 28-400. Iko nwere nghọta dị elu, nwere ike ịcha acha, nwere nguzogide kemịkal dị elu, ma nwee nnukwu okpomọkụ na nguzogide oyi. Igwe karama amba a nke nwere ounce 8 nke nwere ihe na-akpali akpali ojii zuru oke iji kpuchido ngwaahịa griiz gị site na ụzarị ọkụ UV.
300ml amba iko mkpa mmanụ ihicha karama na akpalite ịgba
Ihe iko 300ml amber a na-ebute karama na-enye ihe nkpuchi di nma megide mmiri, gas na mmetọ. Nke a bụ ihe kpatara na ọ kachasị mma ịchekwa ngwaahịa ndị a na-eme n'ụlọ, DIY na-esi ísì ụtọ, ntacha eze na ude mmiri na karama nchekwa. Enweghị ihe mgbochi na nkwakọ ngwaahịa plastik. Site na kọmpụta nchekwa ebe a, ụlọ ịsa ahụ na-efu efu na-adịkwa mma!
500ml 16oz cobalt blue boston gburugburu iko na-akpali ịgba karama na mgbapụta maka mkpa mmanụ
16 oz Cobalt Blue Glass Spray Bottle for DIY nhicha na Mkpa Dị Mkpa; Ndị na-adịghị egbu egbu, akwụkwọ nri niile a na-eme n'ụlọ na-ebipụta n'akụkụ n'akụkụ. A na-ekwe nkwa na-adịgide adịgide. Emebere na China. Sprayer w / stream, alụlụ & gbanyụọ ntọala.
0.5oz 1oz 2oz 4oz cobalt acha anụnụ anụnụ boston gbara gburugburu karama na nwa plastic alụlụ atomizer ịgba
Maka ihe na-esi ísì ụtọ na ihe dị mkpa, iko karama a na-acha anụnụ anụnụ na ọgwụ atomizer bụ nhọrọ zuru oke. Igwe iko na-acha anụnụ anụnụ nke 4oz ga-enyere gị aka ịmepụta ngwaahịa gị n'elu ndị asọmpi gị, si otú a na-enye ụzọ dị mfe ma dị irè iji dọta uche ndị ahịa. Anyị karama iko na-acha anụnụ anụnụ bụ nhọrọ a ma ama maka ndị ahịa aromatherapy n'ihi na acha anụnụ anụnụ nke iko ahụ nwere ike inye aka nyochapụta ụzarị ultraviolet.
Iko karama na ịgba nfuli, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Clear Glass mgbapụta karama,